Gonadotropin Durayo (GnRH) - Shiinaha Ningbo Second Hormone
Shuniu GnRH (haboon lo'da caanaha) Gonaderelin duro fasalka qaran afraad ee daroogada cusub xoolaha [Description] wax soo saarka Tani waa caddaan ama off-cad buro debcinta-qalajiyo ama budo. [Function iyo Isticmaalka] Alaabta Tani waxay tahay degdegga kartaa qanjirka prepituitary xayawaanka ee ah in la sii daayo hormoonka follicle-madadaalo (FSH) oo hormone luteotropin (LH). Waxay leedahay saamayn daaweynba dhammaan noocyada kala duwan ee cudurka ugxan, gaar ahaan ka soo baxa dalool. Waxa kale oo uu leeyahay saamayn ku yeelan xaaladaha ka jira difaaca si ay ...
Shuniu GnRH (haboon lo'da caanaha)
Gonaderelin la isku duro
T uu national fourth class of new veterinary drug
Alaabta Tani waa caddaan ama off-cad buro debcinta-qalajiyo ama budo.
Alaabta Tani waxay tahay degdegga kartaa qanjirka prepituitary xayawaanka ee ah in la sii daayo hormoonka follicle-madadaalo (FSH) oo hormone luteotropin (LH). Waxay leedahay saamayn daaweynba dhammaan noocyada kala duwan ee cudurka ugxan, gaar ahaan ka soo baxa dalool. Waxa kale oo uu leeyahay saamayn ku yeelan xaaladaha ka jira difaaca si chorionic gonadotrophin (HCG) ama LH. Waxaa lagu daweyn karaa failure ugxan samaynta of follicle (ugxan raagay), oo waa la wada isticmaali karaa unugyada labka iyo dheddiga macmal ah, oo sicad u kordhin kartaa heerka rimidda ee estrous oo lo 'ah. Intaa waxaa dheer, waxaa inta badan loo isticmaalo dib u soo celinta hore functional of ugxan dhalmada kadib Caafimaad (40 maalmood dhalmada kadib gudahood); waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa estrus Mudaysan, tiriyaa bacrin in ay soo gaabin bareeg gaarsiinta si ay u gebi ahaanba la hagaajiyo bacriminta bovine ah.
1.Curing ah fiix dalool: waxaa lagu talinayaa in intramuscularly durto Shuniu GnRH 200 mcg waayo, Asagoo arigtadaa ka fiix dalool muhiim ah; waxaa lagu talinayaa in intramuscularly durto Shuniu GnRH 100 mcg waayo, Asagoo arigtadaa ka fiix dalool fudud.
2.It lagu talinayaa in intramuscularly durto Shuniu GnRH 100 mcg waayo, Asagoo arigtadaa ka failure ugxan ah.
3.It lagu talinayaa in intramuscularly durto Shuniu GnRH 100 mcg waayo, Asagoo arigtadaa ka quiescence ah ugxansiduhu.
4. Waxa lagu talinayaa in intramuscularly durto Shuniu GnRH 100 mcg tahay horumarinta ugxan ah.
5. Waa in la wada isticmaali karo la isku duro Cloprostenol Sodium (PG) ee bacrin ah lagu tiriyaa macmal ah xoolaha u caanaha (for isticmaalka cayimay iyo qiyaasta, fadlan eeg 19 th page buugan, Shuniu GnRH (haboon lo'da caanaha) )
Waa mamnuuc in la isticmaalo horumarinta koritaanka.
100mcg × 10 dhalooyinka
Kaydiyaa xaalad hawadu ee hooska (hoos 20 ℃).
Hilibka muddo 7 maalmood ah, Milk 12 saacadood.
Previous: Estradiol benzoate duritaanka (Estrogen)
Next: LHRH-A2 for Bovines duritaanka & Doofaarka
Gonadotropin Waayo, duritaanka (Gnrh)
Human Koor Madbacada qaranka Gonadotropin
uurka Mare Serum Gonadotropin
Uurka Mare Serum Gonadotropin Durayo ...
Dexamethasone Sodium Phosphate duritaanka